Ogoow Muqdisho sida ay mudantahay iyo hadda xaalkeedu sida uu yahay – Bandhiga
Ogoow Muqdisho sida ay mudantahay iyo hadda xaalkeedu sida uu yahay
Maqaalkan waxaan ku eegi doonaa Caasimadda Somalia oo mar ahaan jirtay mid kamid ah Caasimadaha ugu quruxda badan ee qaaradda Afrika laakiin hadda noqotay meel marti gelisay Siyaasado isdiidan oo keenay in ay ku dul daataan dhiigbadan.
Marka la doonayo in la qiimeeyo dal.dad iyo horo-mar waxaa tusaale lagaqaataa hanaanka ay tahay Caasimadda wadankaas iyadoo laga eegayo dhinacyo badan sida horo-mar dhanka dhaqaalaha Waxbarashada,iyo bilicda taas oo muhiim u ah hanaanka dadeed ee uu dalka leeyahay.
Taariikh muuqata ayaa soo maray Muqdisho waxa ayna noqotay Magaalo caan ka ah Aduunka oo dhan gaar ahaan Qaaradda Afrika ,marka loo eego dadkii xilligaas kunoolaa Muqdisho waxa ay heysteen Waxbarasho tayo leh oo lacag la’aan ah taas oo ay ka faaideysteen Arday Soomaaliyeed oo aad u farabadan,kuwaas aqoontii ay kaheleen dalka noqotay in tar-tan aqooneyd ay ka galaan qaaradda Afrika.
Sidoo kale Muqdisho waxa ay laheyd Xaruumo ama Dhismooyin quruxbadan oo qaarkood loo Sameeyay Martida Afrika,waxaana ka xusi karnaa Xaafadda la yiraahdo Afrikan Village oo ku taala KPP ee Degmada hodon,guryahaas ayaa u dhisnaa qaab quruxbadan marka loo eego dhismooyinkii ka jiray wadamada qaaradda Afrika.
Sidoo kale Muqdisho waxaa ku yaala Garoonkii ugu weynaa ee lagu ciyaaro qeybaha kala duwan ee Ciyaarta waana Garoonka Stadio Muqdisho, ee loo yaqaanay Tuulada Ciyaarta,waxaana dhowrmar yimid oo ciyaar ku dheelo Ciyaartow ka kala yimid Wadamo kuyaala Asia iyo Afrika ,waxaana Garoonkaas xilligaas lagu tilmaamay midka ugu quruxda badan qaaradda Afrikana islamarkaana ahaa kan ugu weyn ee ay Afrika laheyd.
Magaalada Muqdisho ayaa aheyd Magaalo ka duwan dhinacwalba Caasimadaha Afrika ,waxaana la xaqiijiyay in Magaalada ay aheyd Magaalo ku quruxbadneyd in loo soo dalxiis tago .
Ammaanka Muqdisho ayaa ahaa mid aad u wanaagsanaa ,taas oo sahashay in Madax badan oo dunida ka socotay ay yimaadaan oo si nabad galya ah ay u joogaan waqtiyo badan wadamada qaar ayaa Xaafado kasameystay ,iyadoo aan tusaale ka soo qaadan karo xerada Ruushka oo iyana ku taala ka soo horjeedka Isbitaalka xoogga Dalka,waxaana degnaa Saraakiishii Ruushka ee xiriirka lalahaa Dowladii Soomaaliya ee uu hogaaminayay Marxuum Maxamed Siyaad barre.
Ujeedka Maqaalkeena aan guda galno Sidan miyey mudantahay Muqdisho?
Wadooyinka Magaalada Muqdisho intooda badan waxaa ku go’an dhagaxaan waa weyn oo laga keenay Wadamo Afrika ,waliba lacago ku yimid,waxaana dhagaxaantaas ay noqdeen in ay yareeyaan isu socodka Gaadiidka,Ganacsiga ,Dadweynaha,Waxbarasha iyo wixii lamid ah ,taasna ma mudno Magaalada Muqdisho.
Muqdisho waxaa ka dhaca qaraxyo iyo weeraro ,kuwaas oo iyagana sababay dhimashada kumanaan ruux oo ah dadka degan Magaalada Muqdisho,sidoo kale qaraxyadaas waxaa ay diideen in ay horo-marto Muqdisho ayna la tartanto Magaalooyinka iyada lamid ah oo Caasimadaha u ah Wadamada Caalamka gaar ahaan kuwa aan isku qaaradnahay,taasna ma mudno Magaalada Muqdisho.
Qaraxyada iyo weerarada joogtada ah ee aan joogsiga laheyn waxaa ay marwalba bur buriyaan dhismooyinka quruxda badan ee ku yaala Magaalada Muqdisho,waxaadna moodaa in dagaal lagula jiro in Muqdisho lagawaayo meel quruxbadan oo ay qabtaan indhaha bani’aadamka,waana arrin u baahan in laga fekero ujeedooyinkan laga leeyahay qaraxyadan iyo weeraradan Siyaasadeedsan ee Muqdisho lagu bartilmaameedsado.
Tusaalooyinka kale ee aysan mudneyn Muqdisho waxaa kamid ah Ciidamo badan oo Afrikaan ah oo qaarkood wadamada ay ka soo jeedaan aan sabab u aheyn in xorriyadda ay qaataan ,waxaa kaloo Muqdisho ku taala meel hoyi u ah dad Shisheeye oo aad mooddo in aysan ka amarqaadan Dowladda Soomaaliya hadii aan magac dhowno goobtaas waa Xerada Xalane oo ay degan yihiin Shirkado Shisheeye taasna ma mudno Magaalada Muqdisho.
Xaafaadaha Magaalada Muqdisho waxaa daadsan qashin farabadan kuwaas oo si aan naxariis laheyn loogu soo daadiyo dariiqyada ku yaala Magaalada Muqdisho,waxaana taas ay qeyb ka tahay cudurada dilaaga ah ee inta badan saameeyay dadka kunool Magaalada Muqdisho,taasna ma mudno Magaalada Muqdisho.
Xadgudubyada lagu sameeyay oo aysan mudneyn Muqdisho ma ahan kuwo lagu soo koobi karo halmaqaal oo qura,waxaana Magaalada laga dhigay mid ayaan daran ah mana ahan wax ay mudan tahay in lagu sameeyo Muqdisho caddey.
Gabagabada Maqaalkan iyo xaqa ay nagu leedahay Magaalada Muqdisho & cidda lagarabo in ay ka shaqeyso horomarka Muqdisho.
Inkastoo hadda ay noo muuqato horo-socod aan badneyn iyo horomar aan xooganeyn hadana waxaa Muhiim ah in Maamulka Gobalka Banaadir oo hadda Sheegay in ay muhiim tahay in la furo wadooyinka Magaalada Muqdisho, ay xoogga saaraan in ay ka dhabeeyaan sidii loo furi lahaa wadooyinka Magaalada Muqdisho oo muhiim u ah Bulshada ku dhaqan Magaalada Muqdisho,waana xaqiiq hadii ay furmaan wadooyinkaas in la helidoono wado lagu gaari karo ama looga shaqeyn karo sidii loo arkilahaa Muqdisho oo Nabad ah ,horomarsan,dadkeeduna ay faraxsan yihiin.
Dowladda ayey waajib ku tahay in ay Shacabka u horseedo qaaciddo tilmaameysa horomarka dalka gaar ahaan Muqdisho oo ah halbowlaha dalka,waxaana Shacabka Reer Muqdisho la gudboon in ay laamaha ammaanka ay kala shaqeeyaan Nabadda si buuxdana ay ugu dhawaadaan dowladooda Sababtoo ah Soomaalida waxa ay ku maamaahaan (Gancmo wadajir ayey wax ku gooyaan).
Hadii lagudo xaqa ay nagu leedahay Muqdisho waxaan noqon doonaa dad la tartama qowmiyadaha asaageena ah Muqdishana waxaa ay noqon doontaa mid naga tiirisa Ciilka ay nabadeen Caasimadaha kale ee dunida ka jira ,kuwaas oo ah Magaalooyin aad u quruxbadan.
Waxaana aaminsanahay in xitaa dhalinteenu ay ka joogi doonaan hanqal taagga wadamada Shisheeye ,Sababtoo ah hadii ay arkaan Magaaladooda Caasimadda u ah oo aad u quruxbadan in jeclaan doonaan sii jogitaanka Magaalada Muqdisho.
Waxaan kusoo gabagabeynayaa marka hore aan gudno abaalka ay nagu leedahay Muqdisho,gaar ahaan waxaan Maqaalkan kula hadlayaa dad kii sida bilaashka ah ugu waxbartay Muqdisho,kuna barbaaray,kudhashay ,Caruurna ku dhalay.
Hadii aan garowsano in Abaalkaas ay Muqdisho nagu leedahay oo aan go’aansano in aan xaqaas gudno waan hubaa in Magaalada Muqdisho ay noqondoonto ay meel ay u soo haajiraan dad badan oo ajnabi ah oo hadda Muqdisho ka aaminsan in ay tahay hoyga halaagga.
Ugaar ah Bandhiga Media
W/Q/ Ahmed Hassan Ibrahim